एक्सन र लभ स्टोरी कथा बस्तुमा आधारित चलचित्र ‘अघोरी’को शुभ मुहर्त (फोटो फिचर) – Etajakhabar
एक्सन र लभ स्टोरी कथा बस्तुमा आधारित चलचित्र ‘अघोरी’को शुभ मुहर्त (फोटो फिचर)
काठमाण्डौं,फागुन ३० । बिलभ्ड इन्टर्टेनमेन्ट प्रा. लि. को ब्यानरमा राधादेवी कटुवालको “अघोरी” चलचित्र निर्माण हुने भएको छ । बिहीवार काठमाण्डौंको भद्रकाली मन्दीरमा सो चलचित्र को शुभ मुहर्त गरियो । थ्रिल एक्सन र लभ स्टोरी कथा बस्तुमा आधारित रहेको बताईन्छ ।
कार्यक्रममा संचारकर्मी तथा संगीतकार सरोज कोइरालाले क्ल्याप हाने पछी कलाकारहरुले डायलग बोलेर चलचित्रको शुभमुहर्त गरिएको थियो । चलचित्रलाई नेपालको पुर्वी जिल्लाहरु, काठमाण्डौ बिदेशको दुबई लगायतका शहरहरुमा छायांकन गरिने निर्देशक भोमन कटुवालले जनाए ।
चलचित्रमा कार्यकारी निर्माता-दिक्षा पाठक,निर्देशक-भोमन कटुवाल,कलाकार-प्रज्वल गिरी,शारदा राज्यलक्ष्मी शाह,मुनम मल्ल ठकुरी,उमेश खड्का,बिन्दा तामाङ,सुरबिर पन्डित,अनमोल कार्की,तारा शाही ठकुरी रहेका छन् । त्यस्तै छायांकन पवन गौतम,द्वन्द राजु किरात, संगीतकारहरु दिपक शर्मा,ॐ सुनार , सरोज कोइराला, सुमन राई को रहेको छ ।
त्यस्तै शब्द डा कृष्ण हरी बराल,मिस्टर आर जे , ॐ सुनार रुबेन पुन मगरको रहेको छ । चलचित्र मा मेलिना राइ, ॐ सुनार, सरोज कोइराला, सुमन राई , योजना पुरी, मिस्टर आर जे ले गायका छन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ३०, २०७५ समय: १४:३२:१९